नायिका प्रियंका कार्की ग’र्भवती हुँदा श्रीमान आयुष्मानले बनाएको भिडियो भा’ईरल ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)…. – SUDUR MEDIA
नायिका प्रियंका कार्की ग’र्भवती हुँदा श्रीमान आयुष्मानले बनाएको भिडियो भा’ईरल ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)….
भिडियो रोचक समाज
May 25, 2021 May 25, 2021 AdminLeaveaComment on नायिका प्रियंका कार्की ग’र्भवती हुँदा श्रीमान आयुष्मानले बनाएको भिडियो भा’ईरल ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)….
नेपाली चलचित्र जगतकी चर्चित नायिका प्रियंका कार्की यतिबेला ग’र्भवती छिन् । प्रायः नायिका प्रियंकाका गतिबिधि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा आउछन् । उनले सेयर गर्ने प्रायः तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा निकै ट्रोल पनि बन्ने गर्छन् । यसै बिच पछिल्लो समय प्रियंकाका सबैजसो तस्बिरले सामाजिक सञ्जालमा तहल्का नै मच्चाइरहेका छन् ।
आफ्ना फ्यानका लागी प्रियंका र उनका श्रीमान नायक आयुष्मान देशराज जोशीले आफूहरु गर्भवती भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा एक तस्बिर सेयर गरे । जुन तस्बिर निकै चर्चामा रह्यो । पछि पेटमा रहेको बच्चा लाई जुस खुवाउन खोजेको दृश्य ट्रोल पनि बन्यो । प्रियंकाले हलिउड बलिउडमा हुने गतिबिधिलाई फ्लो गर्दै पनि आएकी छिन् ।
यसैबिच अहिले प्रियंका र आयुष्मानले आफ्ना बिभिन्न गतिबिधिहरु युट्युवमा अपलोड गर्दै आएका छन् । ब्लग बनाएर दुबैजनाले कम्तिमा एक साताको अन्तरमा भिडियो अपलोड गर्दै आएका छन् । यसैबिच आयुष्मानले एकदिन अघि एक भिडियो बनाएर अपलोड गरेका छन् जुन युट्युवमा एकैदिन झण्डै ६ लाखले हेरेका छन् ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म उक्त भिडियो ६ लाख ७३ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा प्रियंका बिहान उठेदेखी साँझसम्म गर्ने गतिबिधिलाई समेटिएको छ । आयुष्मानले बिहानी प्रियंकालाई उठाए देखी खाना बनाएर खुवाएका छन् । साथै उनले प्रियंकाको खुट्टा मालिस गरिदिएका छन् । थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः
यो हप्ताको राशिफल हेर्नुहोस् : जेठ ९ गते आईतबार देखि १५ गतेसम्मको
क्षणभरमै हेर्दा हेर्दै घर जलेर ध्व’स्त भयो, बन्हु चौधरीले घर जलेको टुलुटुलु हेर्न बाहेक केहि गर्न सकेनन्…..
गायिका रचना रिमालको ”भंगेरी चरी ” सार्बजनिक ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
अभियन्ता हरि उदासीको साइली श्रीमती बताउने महिला दुई छोराहरुसंगै रुँदै मिडियामा आएपछि हरि उदासी पनि आए मिडियामा, के हो त वास्तविकता ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
धरहरा भ’त्किँदा पनि बचेकी श्रेष्ठलाई यति ठूलो सम्मान…..
आफ्नो पूर्वपतिले अर्को विवाह गर्ने खबर सुनेपछि मिना ढकाल आ’गो, मनोजले से’ क्सको लागि विवाह गर्न लागेको आ’रोप ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (3,374)
टिकटकमा भाइरल बनेकी राउटे युवतीलाई हो.टलमा लगेर यौ.न दु.र्व्य.वहार गरेको भिडियो बाहिरीएसंगै संलग्न ३ जना युवक प.क्राउ….. (2,257)
सुनचाँदीको मूल्य फेरी ह्वात्तै घट्यो, यस्तो छ आजको भाउ….. (1,812)
अन्माएर गाडीमा चढीसकेकी बेहुली अंकललाई अंगालो हालेर बेहुलाको घर नजाने भन्दै नछोडेपछी भिडियो भयो भाइरल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (1,771)
आज शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो….. (1,621)
साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस् : भदौ २७ गते आईतबारदेखि असोज ०२ गते शनिबारसम्मको
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल भदौ ३१ गते बिहीबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ सेप्टेम्बर १६ तारिख
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल भदौ ३० गते बुधबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ सेप्टेम्बर १५ तारिख
यो हप्ताको राशिफल हेर्नुहोस् : भदौ २७ गते आईतबारदेखि असोज ०२ गते शनिबारसम्मको
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल भदौ २८ गते सोमबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ सेप्टेम्बर १३ तारिख